Faha-70 taon’ny 29 marsa 47 : hiavaka ny fahatsiarovana hifarimbonan’ny rehetra | NewsMada
Faha-70 taon’ny 29 marsa 47 : hiavaka ny fahatsiarovana hifarimbonan’ny rehetra
“70 taona ny tolom-panafahana: mba hiampita ny fanilo, ny lasa tsy fanadino.” Io ny lohahevitry ny fahatsiarovana ny faha-70 taon’ny 29 marsa 1947. Hanana izay hampiavaka azy izany, fa tsy toy ny isan-taona.
Efa mijoro, ny komitim-pirenena amin’izany, ifarimbonan’ny ny avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika sy ny Primatiora. Eo koa ny avy ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny Fanabeazam-pirenena, ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana, ny Kolontsaina, ny Akademia malagasy, ny fikambanana Fifanampiana malagasy.
Anisan’ny enti-kanamarihana izany ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana tarihin’ny FFKM toy ny mahazatra. Hisy ny fampirantiana momba ny “Raharaha 29 marsa 47“, ny fanavaozana ireo Fasan’ny maherifo. Hisy ny fametrahana fehezam-boninkazo toy ny fanao, ny fanomezana medaly sy mari-boninahitra ireo bekotromaroholatra…
Hohetsehina indray ny endriky ny fitiavan-tanindrazana
Omen-danja ao anatin’ny fandaharam-pianarana, ny tantaran’ny tolom-panafahana amin’izao tsingerintaona faha-70 izao, na efa ao ihany aza izany. Satria anisan’ny ao amin’ny komity ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Misy fifaninanana famoronana tantara momba ny tolom-panafahana, fifaninanana antsan-kira mifototra amin’ny fitiavan-tanindrazana… Kendrena amin’izany ny hanamafisana izay endriky ny fitiavan-tanindrazana eo amin’ny sehatra misy ny tsirairay, amin’izao fotoana izao.
Mba hampiombona amin’izay ny tantara…
Ny “Raharaha 47“, ny tabataba 47, ny tolom-pahafahana 47, ny fikomian’ny Malagasy, ny fandringanan’ny mpanjanatany ny Malagasy tia tanindrazana… Samy fiantsoana ny andron’ny 29 marsa 1947 avokoa ireo rehetra ireo. Tsy mitovy noho ny fomba fijery ny tantaram-pirenena: inona ny marina? Na mba hitovy amin’izay, iombonana sy hampiombona, ny tantara amin’izao hoe faha-70 taona izao…